Ukucaciswa kweVivo X20 Plus, i-smartphone yokuqala enenzwa yeminwe phantsi kwescreen | I-Androidsis
Njengoko besibhengeze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, izolo ibilusuku olukhethwe ngumenzi waseAsia ukuba abonise ngokusesikweni iVivo X20 Plus, isixhobo esigqithe eCES ebibanjelwe eLas Vegas ekuqaleni konyaka, kodwa Ukucaciswa kwayo akuzange kupapashwe.
IVivo X20 Plus sele i-smartphone yokuqala ene-sensor yeminwe edityanisiweyoUmdibaniso okwangoku iApple (ekhethe i-ID yobuso) okanye i-Samsung, eqhubeka nokuxhomekeka kwisenzi esingemva kunye nesikena se-iris, esingakhange sicwangcise ukusisebenzisa, kodwa kungekudala siza kubonelela ngenkqubo ukuqaphela ubuso.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, xa itekhnoloji yokuvula itheminali kunye nobuso bethu ibingekagqitywa ngokupheleleyo, ke ukudityaniswa kweminwe yeminwe phantsi kwescreen kwakuyimbono emnandi, kodwa namhlanje akunjalo. Into ecace gca yeyokuba kwiinyanga ezimbalwa, asizokwazi ukuba abenzi abaphambili bakhetha ukudibanisa iinkqubo zokuqaphela iminwe phantsi kwescreen, okanye nangona obu buchwephesha bufike emva kwexesha kakhulu kwaye ukhetho lokuvula ngobuso iba yinto egqibeleleyo isivamvo somnwe. Okwangoku, apha ngezantsi sikubonisa ifayile ye- iinkcukacha kunye nexabiso leVivo X20 Plus.
Ukucaciswa kweVivo X20 Plus
Iprosesa ye-660-core Snapdragon 8 ikhatshwa yimizobo yeAdreno 512
Isikrini se-AMOLED esingu-6,43-intshi kwi-18: 9 ifomathi kunye nokusonjululwa kwee-pixels ezingama-2.160 x 1.080.
Imemori ye-4 GB ye-RAM
I-128 GB yokugcina yangaphakathi iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-256 GB ngamakhadi e-MicroSD.
I-3.900 mAh ibhetri.
Ikhamera engasemva kabini, zombini i-13 mpx kunye ne-12 mpx yangaphambili.
Ixesha le Ukubhuka kuya kuqala nge-29 kaJanuwari kwaye ukuhanjiswa kuya kuqala nge-1 kaFebruwari. Ixabiso eliqingqiweyo lesi sigxina liza kuba yi- $ 565, inani eliphakamileyo kakhulu kwiimpawu ezisinika zona, apho kulandela ukuba ukudibanisa inzwa yeminwe phantsi kwesikrini kulungile kakhulu, kodwa yinkqubo eyenza ixabiso yesixhobo, esingayi kuba negalelo ekubeni sisithengisi esingcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukucaciswa kweVivo X20 Plus, i-smartphone yokuqala enenzwa yeminwe phantsi kwesikrini
Ndikhangela i-smartphone ene-18: 9 screen kwaye leyo irhabaxa, ukuze ikwazi ukumelana nezothuso, ndiyifumene iBlackview BV9000 Pro, endicinga ukuba inexabiso elihle ngeempawu ezinazo, ucinga ntoni?
I-Android Oreo ifika ngokusemthethweni kwi-Moto X4